Mkpokọta Branddị Mkpokọta maka Njikwa Azụmaahịa
Site n'ọtụtụ data e mepụtara gafee ọtụtụ ọwa ahịa, a na-ama ụdị aka ịhazi ma rụọ ọrụ data ziri ezi iji bulie arụmọrụ cross-channel. Iji ghọtakwuo ndị na-ege gị ntị, na-achụpụkwu ahịa, ma belata mkpofu ahịa, ịkwesịrị mmezi gị ika nkewa site na iji ihe ntanetị na ịkọ akụkọ.
Must ga- mmezi nke ya mere ha na-azụta na onye na aka ekedep (na-ege ntị nkewa) na Kedu (ahụmahụ) na otú (digital ebighị) nke mere na mbọ gị niile dị na otu peeji.
Isi ihe kpatara nhazi a bụ ịbawanye arụmọrụ ma mekọrịta mbọ gị ka ihe ọ bụla wee rụọ ọrụ na nke ọzọ. Mara ihe ndị na-ege ntị ga-ekpebi na-ekpebi ụdị atụmatụ ị ga-eji mee ha, nke na-eduga gị na nghọta ziri ezi iji melite nkewa gị. Ọ bụ okirikiri nke metụtara ma jikọta ya.
Segmentation na-eduzi gị atụmatụ
Segmentation na-agba mbọ hụ na ozi ziri ezi -> na - erute onye zụrụ ya -> n’oge kwesịrị ekwesị. Ọ dịkwa oke ọnụ ahịa karịa akụ na ụba. Site na nkewa ndị ọrụ na - eme nke ọma ị ga - eme ka mmekọrịta gị na ndị ọrụ ugbu a nwee ike ịba uru karịa ndị na - ege gị ntị. Ignkwado nkewa gị na atụmatụ atụmatụ bụ isi.
Site n'inweta nghọta banyere omume ndị ahịa ị nwere nghọta dị mkpa iji nwekwuo ntọghata. Segmentation bụ akụrụngwa nke na - enyere gị aka nyochaa nchịkọta nke ndị na - azụ ahịa nwere ụdị ọrụ ha.
Site na ichota ngalaba ndi nwere ikike ime nke oma, inwere ike mepee uzo ahia di ire nke gha enyere ndi ahia aka nke oma ma mekwaa ntughari.
Ihe 5 nke ngalaba kachasị dị irè kwesịrị
E nwere ike ịchọta - dabere na nha, ike ịzụta, na profaịlụ nke
Nnukwu mkpa - nke oke oke egwu nke bara uru
Iblenweta Ya - nke enwere ike iru ya ngwa ngwa
Ihe dị iche - dị iche na ndị ọzọ
Nke omume - nke na - enyere mmemme / mkpọsa dị irè aka
Ikekọrịta ahịa nke ọma, ịkwesịrị kewaa ha n'otu otu dị iche iche nwere mkpa, njirimara, ma ọ bụ omume ndị chọrọ ngwaahịa dị iche iche ma ọ bụ ngwakọta ahịa. Ọ bụ igodo iji rụọ ọrụ ndị na-ege ntị ị chọpụtala n'ofe usoro okike dijitalụ niile.
Gị iche nkewa ga-mere na ndabere nke
Kedu ndị na-azụ ahịa ga-azaghachi nke ọma na ụdị (s) gị
Ihe kachasị na-ekwu maka mkpa na mkpali nke onye na-azụ ahịa
Ebe ndị na-azụ ahịa nọ na usoro nzụta
Nkọwapụta ọnụọgụgụ nke jikọtara KPI dịka nha na oke ahịa
Mfe njirimara (profaịlụ) njirimara
Okwesiri itinye aka (dabere na ego, ego, na echiche bara uru) yana ikike uto nke ngalaba ahụ
Ikwesiri ighota omume nzụta nke uzo obula ma mepee profaịlụ ndi ahia (site na nyocha na nsochi nke webusaiti bara ọgaranya).
Ikwesiri ibido site na nyocha DNA di iche iji nyochaa ike / adighi ike nke ika a
Akụkụ iji mata ndị otu lekwasịrị anya
Chọpụta ihe ndị bụ isi na nke abụọ
Mepụta akara ọkwa
Mee ka ebumnuche rụọ ọrụ na ika ahụ n'ụzọ bara uru
Ozugbo ị kewara ndị ị na-ege ntị, ị kwesịrị ị na-achọ ndị na-eme ihe ike, ndị nnọchi anya ama, ndị nkwusa ozị, na ndị nkwado. Iji ndị a ma ọ bụ otu ndị a, ị nwere ike ime ka arụmọrụ nke ngwa ọrụ dị elu ma bulie ọnụọgụ nzaghachi.
Segmentation na-arụ ọrụ nke ọma
Iji bulie njikwa njikwa njikwa ma nweta / jigide uru ịsọmpi gị na ịbawanye ntụgharị, ị ga-edozi nkewa akara, izi ozi, na ịmalite.
Ọma segmenting gị ika na kwado ya na ebighị abawanye:
Top nke uche mmata
Iji ojiji CRM gị na isi mmalite data ndị ọzọ, ị nwere ike ịkekọrịta ndị na-ege gị ntị ma nyere aka mee atụmatụ ịmalite ọrụ. Site n’ịkọwa ndị ahịa gị kachasị mma, ị nwere ike ilekwasị anya na mgbasa ozi kachasị mma iji ruo ha na ozi kachasị mma itinye ha na ha.
Mgbe ị na-eme atụmatụ ịre ahịa gị, ị ga-eburu nkewa n'uche ka ị nwee ike ikpebi ihe ndị ị ga-etinye na ngwakọta ahịa gị. Ngwakọta ziri ezi nke ọrụ ahịa na ụgbọ ala nwere njikọ chiri anya na omume nke ndị na-ege ntị.
Nkewa ahia na iwulite echiche bara uru dị iche iche bụ ngwaọrụ abụọ kachasị ike maka ịre ahịa usoro ahịa. Ọ na-akọwapụta nke ọma ebumnuche ndị ahịa ga-eme ka nloghachi kachasị elu na ngbanwe ma nye echiche ka mma banyere ụzọ kacha mma ị ga-esi banye ha.
Ozugbo ịchọpụta nkewa, ịnwere ike idozi ya na mmalite. Mbido ọrụ gụnyere iweta ụdị ndụ na ahịa. Ọ bụ maka ịnapụta ngwa ngwa site na iji ohere ọ bụla iji jikọọ na ndị na-eri ihe ma nwekwuo ahụmịhe ha / mmekọrịta ha na ika gị. I tosiri:
Gbanwee usoro ika n'ime atụmatụ mmemme ohuru
Zụlite njikọta ahịa na ndị ahịa
Mejuputa mmemme mmemme nke ndi ahia
Ọhụhụ ọhụụ na ọnụnọ ọwa
Nyochaa mmepe ahịa na arụmọrụ arụmọrụ
Abmepụta mgbakwunye obi ma ọ bụ nke ezi uche dị n'etiti ndị na-azụ ahịa na akara gị iji bulie njikọ ahụ bụ ihe kachasị mkpa. Nke a kwekọrọ n'otú ị si echepụta echiche na akparamàgwà n'ihe metụtara ụlọ ọrụ gị.
Reportingkọ akụkọ na-enye gị nghọta ka mma banyere nkewa
Nkwupụta nke kwekọrọ na nkewa na-enyere aka ịnye nghọta dị mkpa iji gwa usoro ahịa na iduzi mkpọsa mgbasa ozi.
Ignhazi ngalaba na ịkọ akụkọ, na-enye gị ohere ịchọpụta akụkụ ndị kacha baa uru ka ị wee nwee ike ịbawanye arụmọrụ ezubere iche. Usoro a na-enye gị nkọwa ziri ezi nke akụkụ nke ọ bụla na-enye aka na ROI gị, nke ndị chọrọ nlebara anya na akụ ndị ọzọ, na nke iwepụ.
Ndọtị nhata njikarịcha
Ọnụ asọmpi gị na-adabere na ịchọta ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa / ọrụ gị, wee nweta ha ozi ziri ezi.
Segmentation bụ akụrụngwa iji nyere aka mezuo nke a, mana belụsọ ma etinyere ya na ngwakọta ahịa ziri ezi, ị na-emebi arụmọrụ ma belata n'akụkụ gị. A ghaghị iji ọtụtụ data ị nwere iji chọpụta ma onye ị ga-agwa okwu na otu ị ga-esi rute ha nke ọma iji chụpụ njikọ aka. Ozugbo inwere kwekọọ nkewa nke njikarịcha, ma gbasie ike na ịkọ akụkọ dị irè iji nweta nghọta, mgbe ahụ ị mechara nwee ihe ọmụma ịchọrọ iji bulie ntughari oge niile.
Tags: Ndị na-akwadonhaziMmatabidoro datandị nnọchiteanyaika nkewaasọmpi urumgbanweobe-ọwantinye dijitalụna-ere ahịaarụmọrụndị mgbasa ozi-ọmamụbaa mgbanweNdị na-emerụ ahụenwere ikemarketingarụmọrụ ahịanjikarịchakachasị ahịazuobelata ihe mkpofunkewa